Tag: zvigadzirwa zvemadhijitari | Martech Zone
Tag: zvigadzirwa zvemadhijitari
Heano Ethinos Dhijitari Kushambadzira infographic nezve epamusoro maitiro. zvemukati kushambadzira, nharembozha, kutendeuka mwero optimization; izvo zviri kutsanangura kushambadzira kwedhijitari nhasi uye zvingangove zvine pesvedzero yakakosha pane yayo ramangwana kosi. Izvo zvandino farira nezve iyi infographic ndeyekutarisa kwayo mukugadzirisa zvakanaka ako ekushambadzira madhijitari. PaSocial Media Kushambadzira Nyika mwedzi uno, izvi ndizvo chaizvo zvandichange ndichipa nzwisiso uye marongero e. Vatengesi vakatarisa zvakanyanya ku TOFU